China API 600 Gate Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ | Newsway
အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများ- API 600၊ Gate၊ Valve၊ OS&Y၊ Bolted၊ Bonnet၊ Flange၊ WCB၊ CF8၊ CF8M၊ C95800၊ Class 150၊ 300၊ 2500၊ 4A ၊ 5A၊ 6A ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ- အရွယ်အစားများ- NPS2မှ NPS 60 ဖိအားအဆင့် : Class 150 မှ Class 2500 Flange ချိတ်ဆက်မှု- RF, FF, RTJ MATERIALS: Casting: (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, LCC, LC2, Monel, Hastel၊ STANDARD Design & produce API600 Face-to-face ASME B16.10 End Connection ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Only) - ...
အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ- API 600၊ Gate၊ Valve၊ OS&Y၊ Bolted၊ Bonnet၊ Flange၊ WCB၊ CF8၊ CF8M၊ C95800၊ Class 150၊ 300၊ 2500၊ 4A ၊ 5A၊ 6A
အရွယ်အစားများ- NPS2မှ NPS 60 အထိ
2.RF၊ RTJ သို့မဟုတ် BW
3.Outside Screw & Yoke (OS&Y)၊ ပင်စည်တက်လာခြင်း။
4.Bolted Bonnet သို့မဟုတ် Pressure Seal Bonnet
5.Flexible သို့မဟုတ် Solid Wedge
API 600 Gate Valve သည် API 600 စံနှုန်းအရ ဂိတ်အဆို့ရှင် ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး API 600 စံသည် American Petroleum Institute ၏ စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သပ်သပ်ရပ်ရပ်တံခါးပေါက် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲသပ်တံခါး သို့မဟုတ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော သပ်တံခါးဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံလေ့ရှိသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ API600 Gate Valve
1. ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့် အဆင့်မြင့်စံချိန်စံညွှန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
2. ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် ကျစ်လျစ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး အသွင်အပြင်သည် လှပသည်။
3. ၎င်းသည် အဖွင့်နှင့်ပိတ်ရန် လွယ်ကူစေသည့် အလတ်နှင့် ကြီးမားသော အချင်းများရှိသည့် သပ်အမျိုးအစား elastic gate တည်ဆောက်ပုံကို လက်ခံပါသည်။
4. အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်တွင် ပစ္စည်းအစုံအလင်ရှိပြီး၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် gasket ကို ဖိအားအမျိုးမျိုး၊ အပူချိန်နှင့် အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများတွင် သက်ရောက်နိုင်သည့် အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များအရ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရွေးချယ်ထားပါသည်။
5. အမျိုးမျိုးသောအင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ piping flange စံနှုန်းများနှင့် flange sealing မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားများကိုလက်ခံပါ။
API 600 gate valve တပ်ဆင်ခြင်း-
1. တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ အဆို့ရှင်အပေါက်၏အတွင်းပိုင်းနှင့် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်ကို စစ်ဆေးပါ၊ အညစ်အကြေး သို့မဟုတ် သဲမှုန်များကို တွယ်ကပ်ခွင့်မပြုပါ။
2. ဆက်သွယ်မှုအပိုင်းတစ်ခုစီ၏ bolts များကို အညီအမျှ တင်းကျပ်စေရမည်။
3. ထုပ်ပိုးခြင်း၏တင်းကျပ်မှုကိုသေချာစေရန်သာမက တံခါး၏ပျော့ပြောင်းသောအဖွင့်ကိုလည်းသေချာစေရန်အတွက် တင်းကျပ်စွာဖိရမည့် ထုပ်ပိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးပါ။
4. အဆို့ရှင်ကို မတပ်ဆင်မီ၊ အသုံးပြုသူသည် အဆို့ရှင်ပုံစံ၊ ချိတ်ဆက်မှုအရွယ်အစားကို စစ်ဆေးပြီး valve လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် ကြားခံ၏ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို အာရုံစိုက်ရပါမည်။
5. အဆို့ရှင်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ အသုံးပြုသူသည် valve drive အတွက် လိုအပ်သောနေရာလွတ်ကို သိမ်းဆည်းထားရမည်။
6. Drive device ၏ ဝိုင်ယာကြိုးများကို ဝိုင်ယာပုံးပုံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
7. API 600 ဂိတ်အဆို့ရှင်ကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး တံဆိမကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် တိုက်မိခြင်း သို့မဟုတ် ညှစ်ခြင်းမပြုရ။
ယခင်- API 599 ပလပ် Valve
နောက်တစ်ခု: Bolted bonnet Forged Gate Valve